Sihlaziye i-PLA CARBON evela ku-FFFWORLD, intambo ka-10 | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Kuya ngokuya kujwayeleka ukuthi abakhiqizi abahlukahlukene bazame ukwenza imicu exotic besebenzisa imixube enezingqikithi ezahlukahlukene eziguqula izici maqondana nezinto ezijwayeleke kakhulu, isibonelo, i-PLA noma i-ABS.
Kulesi sihloko sizohlaziya ikhoyili ye-PLA Carbon filament yomnyama omkhulu Kubolekiswe ngumkhiqizi waseSpain uFFFWORLD. Sizochaza ngokuningiliziwe izici ezihlukile zale nto uma kuqhathaniswa nentambo ejwayelekile ye-PLA.
ICarbon PLA intambo ye-PLA ene-carbon fiber. FUTHIn inqubo yokukhiqiza ifake iphesenti lezintambo ze-carbon fiber 5-10 μm ububanzi, obhajwe phakathi kwezendlalelo ngesikhathi sokuphrinta, okunikeza izici ezahlukahlukene zemishini ezingcekeni eziphrintiwe ngale ntambo.
1 Ithula intambo
2 Iphrinta nge-FFFWORLD PLA CARBON Filament
3 Iziphetho zokugcina mayelana nentambo ye-FFFWOLD PLA CARBON
I-FFFword ithuthukile U-OPTIROLL ephumelelayo nenoveli intambo yensimbi eqinisekisa ukuthi awekho amafindo azokwenzeka lokho kungadala izinkinga emaphepheni ethu. Impumelelo iyimpumelelo, sisebenzise yonke ikhoyili futhi asikaze sihlangabezane nenkinga yamafindo noma ama-tangles nganoma yisiphi isikhathi. Iphinde ifake amakhoyili wezinto ngenqubo ebizwa I-DRYX2, inqubo eyoma kabili yento ukuyivimbela ekutholeni umswakama.
Ngaphezu kwalokho intambo i-vacuum ehanjisiwe igcwele, enesikhwama se-desiccant nangaphakathi kwebhokisi lekhadibhodi elijiyile. Umenzi wenza konke okusemandleni akhe ukuze aqinisekise ukuthi okokusebenza kuzosifinyelela sisesimweni esifanelekile futhi ngabe akatholanga umswakama.
Iphrinta nge-FFFWORLD PLA CARBON Filament
Kulokhu kuhlaziywa sisebenzise iphrinta ye-ANET A2 PLUS. Yize ungumshini osezingeni eliphansi (onebanga lentengo elingaphansi kwama- € 200 uma silithenga kusuka eChina) futhi singatholi imiphumela yezinga eliphakeme kakhulu lemininingwane, lilungele izinto eziningi ezisemakethe. Inesisekelo esikhulu sokuphrinta nombhede oshisayo.
Kunconywa ukuqala ngokubheka ukuthi iphrinta yethu ikhipha izinto ezinjani futhi uma sihlanza kakhulu singenza umbhoshongo wokushisa. Umkhiqizi kuzo zonke izinto zakhe wazisa ngemingcele ethile ekhomba ezokwehluka kancane ngokuya ngemingcele yephrinta yethu.
Endabeni ye-PLA Carbon yilokhu okulandelayo:
Ukubekezelelana kwe-Diametral ± 0.03 mm
Ukuphrinta lokushisa 190º - 215º c
Izinga lokushisa elishisayo lombhede 20-60
Isivinini ukuphrinta okunconyiwe 50-90 mm / s
Esimweni sethu esithile sinezingxenye eziphrintiwe ngejubane eliphakathi kuka-50 no-70 mm / s nge extrusion lokushisa 205 degrees kanye nokushisa ku- Umbhede oshisayo we-40 degree futhi akukho fan yongqimba. Umucu ugeleza kancane, unamathele kahle kupuleti lokwakha futhi awunazinkinga ngokuhlehla. Izingcezu eziphrintiwe ziyafana kakhulu futhi izingqimba ziyaqhubeka futhi zivamile.
Ukuphrinta kwento eyisisekelo ebanzi ayikaze iveze izinkinga zokulwa, kepha sithole ukuthi ngejubane eliphakeme kunalezo ezinconyiwe nokuphrinta izinto eziyinkimbinkimbi ezidinga ukuhlehliswa okuningi, kungahle kube nezinkinga zokubambelela phakathi kwezendlalelo. Ungaphelelwa isineke bese uphrinta ingxenye ngayinye ngejubane elidingekayo ikakhulukazi kumaphrinta ane-bowden system, ehlupheka kakhulu lapho ilawula ukuhoxiswa.
Imininingwane emangazayo yilokho impahla engasindi evelayo, Kunconywa kakhulu ukuphrinta izingxenye ezidinga i- ukumelana okuphezulu komthelela ngasikhathi sinye njengokukhanya. Asikwazanga ukumelana nokuphrinta ifreyimu nebhokisi le-drone encane encane esinayo ekhaya.
Siphinde sathola ukuthi izinhlayiya ezincane ze-carbon fiber eziqukethwe kule ntambo zinikeza okokusebenza impendulo enhle kakhulu ekusetshenzisweni kwezingxenye. Umphumela wokufaka isihlabathi ngesiqeshana ukuthola indawo ebushelelezi ngokuphelele futhi ejwayelekile
Nayi igalari enezithombe zezingcezu eziphrintiwe:
Iziphetho zokugcina mayelana nentambo ye-FFFWOLD PLA CARBON
Ngaphandle kokungabaza sibhekene nokunye impahla ephumelelayo kusuka kumenzi FFFWorld , kulokhu uma kuhlanganiswa i-carbon fiber ne-PLA ye i-excelente calidad zitholakele izici ezihlukile zomshini.
Yize kuliqiniso ukuthi le nto ibiza kakhulu ngama-40% kunekhoyili ejwayelekile ye-PLA, i- € 35 / kg lapho umenzi athengisa khona intambo kusengaphansi kwezinye izinketho ezivela kwabanye abenzi esingazithola emakethe. Okuhlangenwe nakho kokusebenzisa le nto kumaphrojekthi ahlukile kuyachuma ngokuqinisekisa ukuthi kuyinto enhle kakhulu kulula ukuyisebenzisa, akukho ukugoba futhi nge-viscosity enhle.
Iphinde ithengiswe ngaphakathi ama-spool amancane ama-250 amagremu nge- € 14, awusenaso isizathu sokumelana nokuzama.
Ukuthandile lokhu kuhlaziywa? Ingabe uphuthelwa obunye ubufakazi obengeziwe? Ungathanda ukuthi siqhubeke nokuhlaziya imicu ehlukene emakethe? Sizokulalela ukuphawula osishiya kukho kulesi sihloko.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Ukuphrinta kwe-3D » Sihlaziye i-PLA CARBON evela ku-FFFWORLD, intambo engu-10
Ungazi kanjani ukuthi sinebhodi lokuqala le-Raspberry Pi